MUUQAAL: Raysalwasaare Khayre oo Booqday Ciidamo ku Sugan Baydhabo | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Raysalwasaare Khayre oo Booqday Ciidamo ku Sugan Baydhabo
Sep 9, 2019 - 45 Aragtiyood
Baydhabo ( Kalshaale ) Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta booqasho ugu tegay 415 Askari Booliis ah oo tababar uga socdo magalaada Beydhabo, loona diyaarinayo ka qayb qaadashada sare u qaadidda amniga dalka.
Ra’iisul Wasaaraha oo uu wehliyo madaxweynaha dowlad gobaleedka Koonfur Galbeed, ayaa ciidamada kula dardaarmay in ay ka faa’iideystaan, si ay ugu fududaato u adeegidda bulshada Soomaaliyeed.
Ciidamada oo Ra’iisul Wasaaruhu booqday ayaa marka ay dhameystaan tababarka waxaa loo qeybinayaa qayb ka ku biirta howl gallada amniga lagu sugayo iyo qayb tababar dheeraad ah la siiyo si ay ugu mid noqdaan ciidamada booliiska gaarka u tababan.
Hoose Ku Qor Fikradada ( 45)
Reer Baoydhaba janaay ma nabadbaa
Reer dhuusamareeb ma nabadbaa
Reer Cadaadow ma nabadbaaa
Markuu intaa dhahoo oo sacab loogu dhufto ayuu dhoolaha ka qoslaa isagoo qoorta kolba dhan u leexinaya gacmaha iyo hadalkana isku wada muraayado madmadowna qaba oo hadba isku saxaya.Halkaa waxaad ka dhadhansan kadhaa inuu yahay nin is mahadiyey oo dadka uu wax u sheegayo iskala sareeya qabwayni darteed.Waana calaamadaha lagu garto kaligii talisnimada
Xaange, salaam kabacdi.
Cadaado waa uu kasoo carary, oo waxbadan Kuma uusan hakin ra’iisalwasaare Kheeyre “tuuga mooska xadi jirry” (land of punt, Kalshaale.ca 2019)sida uu uGu yeero saaxiibkeen land of punt.
Marka, ninkaan waa uu dhibsaday reer Cadaado, sababtoo ah, si frankly ah, oo cadcad ayaa wax loogu sheegay. Meesha Dhuusamareen iyo Baydhabo, eey dad daciif ah, oo odayaal wax eey cunaan iyaga kaligood raadinaya yahiin. Cadaado waxaa jooga, odayaal Ilaaheey mahadiise, ka hadlaya meel ka dheer Meesha eey suufiyaasha Dhuusamareen iyo Eelaaydaan argagixisda ah ka hadlayaan.
Laakiin waa la’idiin baahanyahay reer Garoowe hadii aad tahini, sababtoo ah, laser focus, ah ayaad ku fiirineeysaan in eeysan Somaliya mardanbe qof kaligiis taliya ah, oo daanyeer ah uusan hogaamin dalkaan, oo uusan ku ciyaarin. Kaliya, naga yareeya ajnabiga iyo dalalka kale ee aad leedahiin “cadkaas Somaliya ka qabsada, annagase na nabad galiya, oo nataageera”. Taasi waa cabir xun.
Waar horta waxaan idin weydiiyay ciidamadan maalin kasta tababarka loo soo xidhayo iyagoo dharkii ciyaaraha dalkii Soomaliya xidhan ma JIN bay la dagaalmaan? Ilayn 3 sano oo Farmaajo joogay dhul ay alshabaab ka xoreeyeen la arage!
Mise Farmaajo iyo Khayre shirkad dirayska ciyaaraha samaysta ayay furteen oo ka baayac mushtareeyaan?
Hoosta waxaan ku arkay war Xaange soo gudbiyay oo ay alshabaab shaqo ka socotay garoonka kubada cagta ee Xamar ku joojisay!!!
Markaa muxuu yahay Farmaajo hadii magaalada keliya ee uu ka taliyo Gnacsiga ay maamulaan Alshabaab.
Awoodiisii waxay noqotay;
1. Shacabka Muqdîsho ka xir wadooyinka.
2. Baabi,i maamul goboleedyada.
3. Ka aargooso Ogaadeen & iyo Majeerten.
4. Aamus yaan lagu arkine.
Ugaas salaamulaah waan kaa qaaday salaanta.
Lop waa uu la helay hadalkaa walle kkkkkkk.
Waan ogahay reer Cadaado inay yihiin dad go’aan cad. Reer gowsa isku riix bilaash looguma bixin.Waa dad aan mawqifkooda laga badali karin. Qofka caynkaa ah ayaana wax meel lala dhigi karaa,laakiin munaafiqiinta Khayre iyo Farmaajo dadka caynkaa oo kale ah ma heshiin karaan.
Teeda kale muraayadaha siiba kuwa madow waa la iska bixiyaa marka aad dad wax u sheegayso adoo ixtiraamaya dadka aad la hadlayo si ay indhahaaga u arkaan iyo dareenkaaga.Waa protocol xumo in bodyguard-kii iyo adigii lagu kala garan waayo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Oo yaa, waxaan ilaawey;
5. in uu sidii budhcad badeedka u qafaasho masuuliyiin ka tirsan Jubaland, rahmadna uu u haysto ilaa ay yeelaan siyaasadiisa ah SACABKA II TUMA!
Ninka ay qafaasheen dhawr bilood ka hor isaga iyo Farmaajo muqdisho ayay isla joogeen waxaana lagu soo heshiiyey in Axmed Madoobe la khaarajiyo maadaaba uu u qaabilsanyahay amniga jubbaland.
Waxaana isaga, farmaajo ,Fahad Yaaiin ,Qatar iyo shabaab ka wada shaqeeyeen hotelkii Kismaayo qaraxa lala beegsaday. Halkaa waxaa iman lahaa Axmed Madoobe laakiin nasiib wanaag qolada Shabaabku way soo hormareen. Waxayna hawsha fuliyeen intaan Axmed Meesha iman.
Dharka Shabaabka hotelka soo galay xidheen ayaa ahaa mid khaas ah oo ciidamada Jubbaland ee magaalada ammaankeeda sugayey loo qaybiyey maalmo yar ka hor. Waxaana dharkaa u gudbiyey qoladaa wasiirkan.
Markii arintii fakatay ayuu ninkan soo baxsaday maadaaba lagu daba jirey oo tuhunku soo gali lahaa.Muqdisho markii uu soo galay ayaa la qabtay si aanu sirtaa u bixin. Dowlada Qatar waxay caan ku tahay inay qabato oo xabsi guri galiso dadka ay u adeegsato dhagarta iyo qaraxyada ay soomaaliya ka fuliso. Sida Xasan Daahir,Roobow iyo Atam iwm.
Xaange oo ma waxaas baad dawlad u doorateen?
Waaba maafiya The Ndrangheta.kkk
Totally, kkkkk, gows isku riix. Waa sidaas. Dhaqankii hore ee Somalida ee wanaagsanaa ayaa waxuu ahaa, dadku amaba qofku in uu mowqif iyo mabda’ leeyahay/leeyahiin, oo dhinacyo kasta iyadda oo qollo kasta la tixgalinaya ideas, thoughts iyo conviction kooda wax dadka u wadda dan ah lagu heshiiyo.
Maalin dhaweyd inkasta oo aanan jecleeyn daanyeer Daahir Alasow, bogiisa Ayaan waxaan ka daawaday video uu ku leeyahay, Kheeyre markii uu Dhuusamareen tagay, kulli odayaasha suufiyada ee Ceeyrka afduubtay mid kasta waxuu leeyahay “aryaa ra’iisalwasaare burro aa igu taal, oo in dibadda la’ii qaada Ayaan rabaa, mid kale waxuu leeyahay, aryaa ra’iisalwsaare Isha ayaa i xanuuneeyso, oo qaliin indhaha dibadda ah Ayaan u baahanahay”. kkkk, hader, qoodhaa iyo xeradaa fiiri dadka noocaas ah, oo arrimahooda u qaaska ah ka hadlaya amaba u ordaya, ayaa reer dhan afduubtay, oo indhaha ka daawanayaan! yaab
Xaange, midda ookiyaalaha, walaahi waa runtaa, oo maalain dhaweeyd Ayaan mowduucaan oo laga hadlaya “sunglasses” amaba ookiyaalaha daawaday. Waxeey quburada iyo dadka Etiquette dhaqanka wanaagsan ku taqasusay isku raaceen, in si aad u ixtiraamto audience, amaba qofka/dadka aad la hadleeyso, eey tahay in aad ookiyaalaha qoraxda iska bixiso.
Laakiin, then again, daanyeerkaan Kheeyre, waxaaba ku cusub ookiyaalaha iyo dharka sida loo xirto, iyo kulli status ka, uu helay, ee ra’iisalwasaare. Waana “show boat” marka qof noocaas ah, walaahi in aanan ka sugeeynin in uu dal iyo dowlad horray u waddo. Ha’iska harowsada masaakiintaas.
Meeshaa dawladnimaa ka bidhaamaysa, cadowgoo dhan ha ka naxo hadduu doono.
Dalmida iyo dadmida.
Wasiirkaasi nin adag ayuu ahaa laakiin waa laga caqli badiyey waxaana lagu beerlaxawsaday reer ahaan.Laakiin waa hore loo yiri god walaal ha qodin ku dhici doontidaana lama ogee.Ruuxa ku aaminayna lama khiyaamo oo Axmed wuxuu ahaa sirmaqabe allaw sahan ah.
Khayre waa Geesi u soo baxay Somaliya.
Walee waa nin Hogaaminkara Somaliya.
Kan oo kale uma malaynayo inuu soo maray Somaliya 60kii sano ee xorta ahayd.
Sxb qofka madaxdaa waxaa laga rabaa inuu waxuun ka barto rhetoric-ga iyo waxa loo yaqaan Public Conditions-ka. Laakiin hadaad adoo camma ka ah soo istaagto markiiba waa lagu arki oo waa meesha soomaalidu ka tiraahdo dhal magaalo inta aad ka noqotaa way dheertay dhar magaalo inta aad xirataa way dhowdahay.
Laakiin la yaab malaha oo waxaadan aqoon hadii aad gacanta la gasho waa iska caynkaa kan ciyaala suuqa ah ee Donald trump isba sow maadan arag sidii gabar yar oo foodley ah is jajabiya marka uu hadlayo.kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Fron restaurant owner up to prime minister masaafo dheer ayaa u dhaxaysa Alif adigoo dhigta albaqra hadii laguu bootiyo wax sahlan maaha. Laakiin Farmaajo waa nin ka karti badan raga lama xasdee kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Hadii xaqiiqda loo hadlo. Xasan cali kheyre waa hogaamiye culus.
Yaa ii sheegi karo. Raisulwasaare somaliyeed oo 40 cisho Hal maamul gobaleed. Salli dhigan karo siduu wax ugu dhisi lahaa haduu doono how niso wuxuu isagu doonee.
Xasan cali kheyre. Waxaa lagu xantaa in uu dhaqan kaligii taliye leeyahay. Laakiin waa muhiim in aad tahay nin wax diidi karo waxna yeeli karo. War madaxweyne farmaajo ayaa qof jilcan oo soo qaldamay ah. Ma waxaad rabtaan. Kheyrana in uu noqdo qof jilcan.
Masha allah raisalwasare khayre aloow ku daa waa
Geesi somaliyed waxaa muqda rajo wayn o qaranka
Dib loogu dhisayo sharfta iyo haybada… somaliyeed
Waxaa soo celin kara XOOGA DALKA kukuyooy
Dawo dalkeena difaaciisa
Raisulwasaare. Xasan cali kheyre.
Waxaa ka dhiman hal arin in uu sameeyo.
Wasiirada kasoo jeedo pudland in uu Wada raacdeeyo. Kuwa kasoo jeedo jubaland in uu raacdeeyo. Kuwa kasoo jeedo woqooyi in uu shaqada ka raacdeeyo.
Wasiirkii aan ciidan canshuur ama dhulka dowladda laga tageero ka keeni karin gobalka uu kasoo jeedo yuu u sheqeyaa. Albaabka halaga saaro.
Booska wasiiradaas halla siiyo mudug galmudug. Hiirshabeele. Iyo Koofur galbeed.
Dowladnimadu kuraajo iyo go.aano adag ayey u baahan tahay.
Cumar xaashi wasiirrkii difaaca ee dowladdi shariif. ALLAYA raxma Ayaan ka hayaa wasiir walbo halla yimaado ciidankii amaankiisa sugi lahaa. Hadii kale meesha nagu kala kexeeya.
Adeer aabaha QARANKA somaliyed madaxwayne
Farmaajo… taladisa maaha inuu dadka iyo dalka
Somaliyed kala diro waa aruuriye ama mideeye raba
Inuu taariikh ka tago raisalwasare khayrana wuxuu
Ku shaqeeya talada iyo awamiirta dowladnimo wana
Nin wax ka yaqaan habraaca QARAN maaha siyasi
Caraysan…..,,oo waayey fursad uu ku hogaamiyo
Dal toosan tayeysan oo midaysan
“Raisulwasaare. Xasan cali kheyre.
Booska wasiiradaas halla siiyo mudug galmudug. Hiirshabeele. Iyo Koofur galbeed.”
@Garqaad 100% waa kug raacsanahay fekerkaa. Weliba ugu horaysiiya wasiirada asal ahaan ka soo jeeda Somaliland.
Balana waxaan kuugu qaadayaa xitaa in kharashka tarxiil-kooda aanu bixino.
Sxb PM Khayre in tuug Wardhiigley Moos ka xadi jiray markuu yaraa anaa kuu hayo. Kkkkkkkkk
Nin faqrinimo iyo qabiil ku koray.
Hadalka Xaange sheegay waa hadal weyn, meel kasta tago ookiyaalo madow sitaa, waa ixtiraam daro.. Ookiyaalo cad oo aragtida waa la ogol yahay oo waa cudur.
Laakiin in wajigaagavku qarinayso waa munaafaqad.
Khayre marka gobolada wareegayo hala ixtiraamo, kollay aniga rajo Somalinimo ayaa i gasha.
Waa run . ( Xaange & Cadaado ) . Markaad la hadleysid , gacanta ka salameysid , iwm
Waa inaad siibtaa ookiyaalaha aan aheyn arag iyo badbaado. Sidoo kale waa inaad siibtaa gacmogashi aan lagu qasbaneyn . Sidoo kale qofka yar ( Caruurta ) markaad TAAGNI kula hadleysid waa inaad raadisaa qaab ay isuwajihikaraan indhihiina kollaad KADALOOBSATID ama fadhiisatid . Markaad tahay masuul sare boqolaal wax amaba sifo ayaa iyagoo MUBAAX ah hadana waxay kaabixinayaan tilmaamo iyo sifooyin XUN .
Kaagadarane waxaa jira sifooyin ay ku xunyihiin ragga iyo kuwo ay ku xunyihiin dumarka & kuwa ay usimanyihiin . Waa ciidaas oo faraha lagaliyey . Ilbaxnimadaas lootiirinaya reergalbeedka waxaa kaga horeeya islaamka oo qofkii uu dhaqankiisa yahay kan islamka wuu ka badbaadayaa qaladaadkaas , kuwaasoo uu kibirka / jahliga u yahay sabab .
ALLAAH maxaa daanyer Barxadda biqlayn; Macallim Xaange, kan dabayl kasta iska raaca Cadaado, odaygi asaasaqay Laalays. °Horta kan kooxdaan madaxa u ah ee Erdogan kula dagaalsan MUXUU Qardho u tegi waayay MA Cuthmaan M/muud baa?. °Erdogan Miya kala yaqaan ama kala jecel Caluula iyo Ceel Bashaqle WAA u wada Somaliye. °Kuwaani maba garan weli ISBELKI ka dhacay Somalia 19/8/2011ki. Daanyeero iga dheh. WBT
Saleebaanka waa rag macquul ah, oday Jabhadihii Kacaanka la dagaalayey isku jireen ii sheegay…..
Saleebaan Dekedii Hobyo Sacad lahaan jirey maanta waad ka xoogteen oo Hobyo gudooniyaha degmada Hobyo waa Saleebaan… Yaab.
Marka haddii Saleebaan Galmudug spaaro u dhigto dee Suufiyada Cayrka maxaad dhaantaan, sow halkaas Saleebaan waa rag macquul ah kuma dhiman.
Mudug Hobyo, Galguduud Cadaado idinka badan ee buuqa dhaafa oo Khayre taageera.
Meesha Sacad baa ku dulman oo Baraxley u hartay.
Sacad waa la siray, Madaxweyne noo noqda oo iska celiya Majeerteen oo Galkacyo ku qabsada ayey ku dhamaadeen……run
Hadda arinku wuxuu marayaa= Yaa xiniinyo weyn Cayr iyo Saleeban, yaa qaadan caasumadda iyo madaxda sare…kkkkkkkkkk
Mareexaan iyo Sacad waa marti, yaaba wax waydiinaya..kkkkkk
Mid Ciise Maxamud ah oo Garoowe jooga ayaa igu yiri: Anaga Cise Maxamud Puntland waan ku dulmanay oo xitaa magaaladeenii nalaga qaaaday oo marti ku nahay..kkkkkk
Kuye ilaahow Puntland naga dumi……kkkkkk
Intaan qoslay ayaan ku iri: Eey riyo was ayaa tahay oo aduun la socon.
Somalidu gar ma kala qaadato, midwalba anaa dulman oo xoolo iga maqan yihiin ku oran.
Daanyeertaan Somalida cidba ma xukumi karto..Farmaajo iyo Khayre oo Useless xagay joogaan.
Xaange iyo Daayeer Cadaado.kkk
Dhinac waa idinku raacsanay in Khayre khalad/ceeb kutahay muraayad madow u soo xidho shacabka “madaxda”u yahay.
Dhinaca kale ee aan ka eegay, dee Khayre shacab ma dooran ee waxaa doortay la waa Farmaajo!kkk
Khayre hada doorashada 2021 ayuu tartankeedii bilaabay. Farmaajona wuxuu soo toosi iyadoo shacabku ku baaqayaan “Ii gee Khayre”
Maxaa ka dan bayn???
INTAAN wax qoray waxaa Barxadda soo galay KABAHAYGI Jabhad, Saxibkay LOP oo asluub uun ka hadlay (waana ku farxay inuusan Shatiga ka qoyn dhiigga firdhana), Abti C/Raxmaan oo aanan eray la kahsado u quurin. °Abti dagaalka kor kala soco HA i dabrine. °Canaasiirti uu madaxa u ahaa Xaange WAX maydiin sheegay? Idinka iyo wixii noociina Gabalkoodi siyaasadeed waa dhacay ee is daba Qabta. °§*=°§*Wiilashi binu Isxaaq IDINKAABA LAYDIN GAADAYAA WAADAN GARANAYNE, war dagaalka dhexda ka soogala oo sidii XERSI rogaal celin gacmuhu haydin ku daaleen. TALAF WANA CUNTAYN. WBT
ASC markale dhamaantiin.
Garqaad, eebow ninkaan mooska Wardhiigleey ka xaddi jirray ee ra’iisalwasaare Kheeyre ma sameeyn karro waxa aad dhahday oo aan kugu raacsanahay oo ah “in uu raacdeeyo wasiirkii aanan reerkisia ka keeni karrin 200 oo askir, iyo cuntadii iyo qarashkii lasiin lahaa 200 oo askar” Laakiin, maka suurtowda ninkaan in uu si cadaalad ah dadka wax uGu sheego, kuna hogaamiya. Isaga iyo boss kiisa, madaxweeyne Farmaajo iyo nidaamka Somalida ku shaqeeyaan ayaanba aheeyn mid ku dhisan “isla xisaabtan”.
Macalin C/Raxmaan, waad mahadsantahay. Waana runtaa dhaqankaas Westiga hadeer dadka barraan, ee ixtiraamka ku dhisan waxeey ka copy gareeyeen, kana barteen, oo kaga horeeyay Islaamka. Kahor inta uusan Islaamka ilbanximadiisa, iyo horumarkiisa uusan hoos u dhicin (kadib markii eey soo baxeen hogaamiyayal daanyeer ah sida Saadax Xuseein, Khadaafigii Libya, boqoradaan daanyeerta ah ee khaliijka etc).
Land of punt, saaxiib, sytem ka iyo bani’aadamka ayaaba saas u shaqeeya. Kadib markii eey Sacadka iyo hogaamiyahooda qabqablayaasha dagaalka eey iskusoo shubeen Xamar, oo eey dhac, dil, dagaalo iyo balaayo kawadeen Koonfurta Somaliya, iayga iyo waxii eey duufsadeen ee daanyeerta ahaa, Saleebaanka gocosadda aad sheegto ayeey beeraneeyn, iyo iddo eey ku dhaqaneeyn Hobyo, waana dageen, inyar oo mooryaan ka noqotay maahanee 🙂
Laalays, adiga waan kusalaamay kaliya. Waxaad iska deeysaa Somaliland waxaan aad ku sheegeeyso, ee dhex Isaaq. Waana kugu raacsanahay in wasiirada Isaaqa laga soo raacdeeyaa Mogadisho. Laakiin, iga ilaali Somaliland, iyo blah blah daan aad ku qarweeysid.
ASC markale dhamaantiin (sorry, waxii oo dhan Ayaan hal paragraph ka dhigay kor)
Anniga haa, dabayl kasta waan iska raacaa, laakiin, guulwadow Siyaad amaba ar Farmaajo ii geeya ma dhahayo. Nostaliga ayaa ku heeysa oday, iyo waayo waayo. Dadkii wadankaan burburiyay ayaad kamidtahay, waxeey aheeyd in la’idinka maggo waxii aad dalkaan barteen, qabyaalada, lazy iyo ma shaqeeystanimada, xadgubka, waxa dhaca, eexda, cadaalad darrada iyo waxa aanan halkaan kusoo koobi karrin. Waxaas oo xumaan ah ayaad rabbi laheeyd adiga iyo jiilkaada in aad soo celisaan. Never ever again!
Aad iyo aad qofkii diinta wax ka garanaya eeku dhaqma siday tahay wax badan ayuu garanayaa. Sida in la ixtiraamo qof kasta oo kaa jilicsan. Tusaale ahaan inaadan qof laangare ah oo salaanka ama jaranjarada sii koraya inaadan dhaafin ee aad ka dambayso oo si xushmad leh u daba socoto adoo waliba aan dhibsanayn ee la sheekaysanaya oo nabdaynaya iwm.
Ahmed Somali & Jabhad
Raggiina qolada wardhiigley fadhida taageera. Bal ka jawaaba waxa wasiirka jubbaland loo xiray markii uu Kismaayo kasoo noqdey ee loo xiri waayey marar badan oo uu muqdisho tagey? Ileen dambiga ay kusoo oogeen ay sheegayaan inuu galay waa mid waa hore dhacee
Waan kugu raacsanay in nolosha saas ku dhisan tahay, booska ka tagto rag buuxin..
Waad saad sheegtay Sacad Caydiid, Caato iyo Qaybiid ayaa ilaa, Kismaayo, Baydhabo, Gedo ilaa Galkacyo dagaal ku dhameeyey.
Waa natural outcome, vakuum la buuxiyey.
Saruur, Duduble, Dir, Wacaysle, Murursade dhulkoodii Shabaab baa haysta oo odayadooda xitaa lama maslaxweyo, waxwaba lama waydiiyo.
Cayr iyo Saleebaan ayaa keligeed gow iyo gash malaha ku haya…..yaab. Sparo cad dhigteen.
Dadka inta kale ma rootiyaa.!!!!!!🤔
Time will tell, daanyeernimada socota.
Sxb wax haddaad matalayso si dhaba ayaa loo matalaa protocol-keedana waa inaad la timaado. kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Ina adeerkay Gaas baan waa kula yaabi jirey inaad moodo inuu meel kale u jeedo marka yy dadka salaamo.Oo waan is oranjirey war muu dadka qummaati u eego. Laakiin waa dambe ayaan ogaadey inuu cudur daar leeyahay kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Adeer xabadda marmar ayaan kor iyo hoosba u ridaa oo cidda ku dhacayso kala jeclayn.
Caawa xabadda ragga qaar kor uga qaadayaa.
Cadaado oo dulmane iska dhigaya oo suufiyada Cayrka powerka ku haysta ayaan ka dul ridayaa….kkkk
Nimankii Saleeban oo gocosada qodan jiray maanta waaba ku ceeb hadaadan ido 100 ah wadan….
Badmaax noqdeen sidii reer Bariga, Afweyne iyo Tiicey waydii..kkkkkkkk
Deked caalimaha dhisanayaan, welina cayrkii Caasumada ku haystaan, Khayre hadduu ka horyimaadana maqaarka ka fiiqayaan..
Cayr iyo Saleebaan waa rag powerka Galmudug isku haysto ee hala ogaado.😝
Gaas waa weershe, kkkkkkkkk
Kuwaan ookiyaalaha isku qarinaya la yaabay..
Farmaajo, Khayre, Laftagareen..kkkkkkk
Markii inta naloo yimaado la dhaho ciidan qaran ayaa la dhisayaaye ee qaybtiina keena. Oo gobol walba inta la tago ciidamo isu dheeli tiran laga soo qaado meelna la isugu geeyo. Haddaan diidno markaa anagaa gar daran.
Markii mashaariicda magaca soomaaliya lagu soo qaato si cadaalada loo qaybiyo meel kasta oo nabdoona baahida ay qabaan wixii ku habboon wax lagala qabto. Markaa haddaan wax diidno anagaa qaldan.
Taageerada magaca soomaaliya lagu soo qaado oo malaayiinta doolar ah haddii qaybtayada naloo keeno. Markaana canshuur haddaan diidno anagaa qaldan.
Teeda kale Galmudug,Hirshabeele iyo K/Galbeed iyagu ma canshuur bay bixiyaan mise malayiin doolar ayaa bulshada halkaa ku nool lagu kala laaluush si shakhsiyaad maddiidaysan looga soo saaro halkaa
Saaxiib in Saleebaanka dulmanne yahay ilaa iyo waagii Shiiq Shariif, iyo Xassan Shiiq iyo Saacid, ayaan faataxa qaadaneeynay, oo wax kasta u tanaasuleeynay,si wax uun horay ugu socdaan. Ceeyrka suufiyada kama ahan daacad heshiis kasta, oo niman burcad ah ayaa ku qaraabanaya magaca Ahlusunna. Heshiis kasta iyo wax kasta oo lagu heshiiyana ka baxayay. Karma, ayaa kala qabsatay iyaga iyo Sacadka kkkkk
Midda kale, badmaaxnimo iyo burcad badeedba adinka ayaa tababarka idinka qaadanay. Sacadka hadeer ayeey rabaan in eey Hobya kusoo noqdaaan, laakiin, too late, oo demographic kii iyo dadkii waa is badaleen. Saas oo eey tahay, xaqooda iyo qeeybtooda waa laga siin magaalada Hobyo, waa hadii eeysan isbaaro iyo waxii daanyeernimada ahaa eeysan meesha keeneeynin kkkkkk
BRAVO Xaage; “Teeda kale Galmudug,Hirshabeele iyo K/Galbeed iyagu ma canshuur bay bixiyaan?”( calaamadda aan kugu daray ha halmaamin). °Adeer intaa u sheeg ma gudbaha Dabshid iyo CAR CALIYAALO II SOO DHAAFTIISI. WBT
Adeer haye waan kaa qaatay intaa.
Halkan shuruudihii qoraalka inta badan sidaa uma ixtiraano oo waa iska feegaar.Laakiin in la saxo waa wax meesha ku jira
Cadaado, Horta caawaad ugu liidatay MARKAAD ammaanti kala masuugtay Belihi kale ee Somali ee Aad Saleebaan Kaliyah ammaaantay XITTAA reer Qalafki dhaawiciina guray aad MAHADSANID u quuriweysay. °Adigu abaal ma gudi taqaanid MA AHA BEESHA. °SARIIRTAAAY!!!. WBT
Wasiirka la xiray hada markii hore ee muqdisho
Yimi wuxuu lahaa XASANAD oo wuxuu matalayey
Jubaland lakiin markii dorashadii la bobay oo ay soo
Bexeen 3 madaxwayne dee ninku XASAAND maleh
oo waa shacab waana la qaban karaa xaqiiqdu waa
Saas ….. boowe… maanta maka war qabtaa in
Wasaarada arimaha dibada ee federalka. Xafiis ka
Furatay magaalada GAROWE oo reer puntland loo
soo dhoweyey la xirirka wasarada waxaa kaloo soo
Socda wasarado kale .. ari boowe hoos u dhugo
Wada shaqaynta VILLA SOMALIA iyo GAROOWE
wasarada arimaha dibada ee somaliya oo xarun wayn
Ka furatay magalada garoowe bal daawo horumarka
Nin baa laga sheegay “Colaad bariweyn caano iguma miri jirine talow caawa ma doorshaan baa uga dhacay”
Waan ogahay in Khayre iyo Farmaajo uu ka dhex curtay competition ku saabsan doorashada soo socota.Oo labaduba ninba dhankiisa wax u wato khilaaf aan soo shaac bixina uu ka dhexeeyo.Farmaajo markuu arkay inuu meel cidlaa fadhiyo ayuu malaha bilaabay inuu xooga meeshii uu joogay xoogaa kasoo dabcay.Khayre wixii uu lacag hayey iyo wakhti wuxuu dul dhigay Galmudug.Wuxuuna ku xisaabtamayaa Galmudug, Hirsshabeele iyo K/Galbeed.Halka Farmaajo aanu waxba gacanta ugu jirin.Marka ha biciidsan inuu maalmaha soo socda bilaabo inuu siyaasadiisa ku aadanayd Puntland & Jubbaland uu wax ka badalo.Laakiin waxaad moodaa inuu noqday ciywogii waa ka beryey.
Somaliya waxaa maqan kaalintii shacabka.Sahacb ayaa wax diida waxna doorta.Shacab ayaa heshiiya hadii ay wax ka qaldamaan.Shacab ayay ka soo baxaan Madaxda wax hogaamiyaa.
Waad caayikartaa Khayre ama Formaajo.Waad iska cambaaraynkartaa ciddi hogaanka qabata,laakiin shacabkii diidi lahaa ninka xun ee fursada siin lahaa ninka fiican meesha ma joogo.
Aaaway shacabki Somaliyeed?
Bal meel ku sheega shacabkii Somaliyeed.
Ma jiraan.Way dhinteen.
Ahmed Somali, dhaawacee eey reer Khalafka aad sheegeeyso gurreen, reer Khalaf amaba Jalaf horta kee sheegta Sacad keese sheegta Majeerteen, waa iga daacad walaahi? anyways, waxaan aad sheegeeyso ma aqaan. Waan maqlay in waa Saleebaanka iyo Majeeerteenka eey xulufu ahaan jirreen, markii labadda reerba eey midna Mareexaanka oo dowladda dhexe isticmaalaya eey dagaal qabiil iskula jirreen, midna eeyba dowladda dhan ee Jaale Siyaad u aragtay qatar, oo eey la dagaalantay.
Midda kale, Ahmed Somaliyow waataaas marka aan kuleeyahay hal dhinac baad bahasha u wadaa, oo aad u xaglin, cadaaladna waa kaa fogtahay. Aan adiga iyo saaxiibkeey Xaange idin xasuusiya su’aasha aad dadka weeydiiseen ee ah reer Galmudug iyo Hirshabeel, canshuur meey bixiyaan? Su’aashaan maalin dhaweeyd waxaa si wanaagsan uga jawaabay caaqil Garqaad, oo waxuu dhahay “reer Galmudug iyo reer Hirshabeele lacagtooda iyo ganacsigooda waxuu kasoo dagaa dakada Mogadisho, oo sidaas ayeey canshuur ku bixiyaan oo eey dowladda dhee u siiyaan”.
Waliba aniga waxaan ku darri, in eey xataa argagixisada alshbaab lacag baad ah siiyaan labadaan maamul.
Mr. BaHaL, aqoonyahan, waa runtaa oo madaxda umad waxeey kasoo dhex baxaan shacabka dal. Shacabka Somaliyeedna in eey kaalintooda gabeen waan kugu raacsanahay.